महिलाको सिटमा पुरुषको दादागिरी « Loktantrapost
महिलाको सिटमा पुरुषको दादागिरी
२४ पुष २०७२, शुक्रबार ०४:२०
विहीबारको कुरा हो । म विर्तामोडबाट इटहरी जान एउटा नन् स्टप बसमा चढेँ । बस भरिभराउ थियो । सबैतिर आँखा घुमाएा । सिट खाली नदेखेपछि बस चालकलाई नजाने सङ्केत गर्दै बसबाट ओर्लिएँ । चालकले खलासीलाई सिट मिलाइ दिन आदेश दिए । चालकको आदेश शिरोपर गर्दै खलासीले सुरुङ्गाबाट सिट खाली हुने र त्यसमै राख्ने सर्तपछि म फेरि बस चढेँ । बस नन् स्टप नै रहेछ । केही समयपछि नै सुरुङ्गा पु¥्यायो तर सिट खाली भएन । त्यहाँ पनि केही सिट पाइने आश्वासनपछि मान्छे थपिए ।
थपिएका नयाँ यात्रुमा बच्चाकी आमासँगै लगभग ८० वर्ष नाघिसकेकी हजुरआमा पनि थिइन् । बस माइधार कटेपछि ‘मेरो बच्चा छ । खै सिट ?’ भन्दै बच्चाकी आमा कराउन थालिन् । सँगै चढेकी हजुरआमाले पनि ‘म बुढीलाई सिट दिए त धर्मै हुन्थ्यो’ भन्दै उभिन गाह्रो भएको जनाउ गरिन् । उनीहरूको कुरालाई कसैले वास्ता गरेनन् ।
फेरि मैले सबैतिर आँखा डुलाएँ । बसको दाहिने पट्टिको पहिलो सिटमा ‘असक्त’ र देब्रे पट्टिको दोस्रो सिटमा ‘महिला’ लेखिएको रहेछ । ती सिटमा त जवान युवाहरू बसेको देखेँ । अनि ती सिटमा बस्ने भद्र युवा जनलाई अनुरोध गदै भनेँ ‘हजुरआमा र बच्चाकी आमालाई उभिन गाह्रो भइराछ यो त असक्त र महिलाको आरक्षण सिट हो छोडिदिए राम्रो हुन्थ्यो ।’ तर उनीहरु टसमस भएनन् । घुर्दै उल्टै आँखा तन्काएर पो हेरे ।
पुसको जाडो छ । बाहिरबाट आएको चिसो हावाले कठाङ्ग्रिएको शरीरमा एकैचोटि तापव्रmम बढेर आयो अनि गुडिरहेको बस चालकलाई गाडी रोक्न भन्दै सोधेँ, ‘यो के पारा हो ? बच्चा बोकेकी महिलाले ‘महिला’ लेखिएको र ती वृद्ध आमाले ‘असक्त’ लेखिएको सिटमा बस्न नपाउने ? ट्राफिकलाई खबर गरौँ कि सिट मिलाउनु हुन्छ ?’
त्यसपछि खैलाबैला मच्चियो । अरु यात्रुले पनि ती युवालाई सिट छाडिदिन दबाब दिए । चालकले सहचालकलाई गाली गरे । सहचालकले ती भद्र देखिने युवा जनलाई अनुरोध ग¥यो तर उनीहरूले उल्टै थर्काउँदै भने, ‘बसमा पनि कतै आरक्षण हुन्छ ? हामी पनि काँकरभिट्टाबाट धरान जाने भनेर पैसा तिरेर चढेका । तिमीले छोड् भन्दैमा छोड्ने होइन । जाऊ कहाँ गएर उजुर गर्छौँ गर । ट्राफिकले केही गर्ने थियो त अघि गरिहाल्थ्यो नि काँकरभिट्टादेखि दमक आइपुगिसकियो ।’ उसले उल्टै थर्कायो ।
गाडीमा हल्लाखल्ला धेरै भएपछि पछिल्लो सिटका अधबैंसे जोडीले ती बच्चाकी आमा र बुढी आमालाई सिट छाडेर विनम्रतापूर्वक बसाए । भगवानले तपाईँहरूको रक्षा गरून् भन्दै ती असहाय जस्तो देखिने बच्चा बोकेकी महिला लामो श्वास फेर्दै सिटमा बसिन् । धन्य ती जोडीलाई । उनीहरू सिटमा बस्न पाएपछि मैले आफूले उभिनु परेको सास्ती बिर्सेँ ।
चालक वा सहचालकले पनि सकेसम्म सम्बन्धित मान्छे बस्नका लागि आग्रह त गर्छन् तर पनि सिटभन्दा बढी यात्रु बोकेर छिटो पैसा कमाउने सोचले हिँडेका उनीहरूले चाहेर पनि कार्यान्वयन गर्न सक्दैनन् । राज्यका हरेक निकायमा महिलालाई ३३ प्रतिशत आरक्षणको मुद्दा स्थापित भएपछि सार्वजनिक सवारी साधनमा पनि महिला, अपाङ्ग, वृद्ध र असक्तहरूका लागि सिट निर्धारण गर्ने असल परम्परा बसेको छ तर त्यसको कार्यान्वयन नहुँदा दुःख लागेर आउँछ ।